Local News – Myanmar Info Hub
ဘဏျလုပျငနျးမြားနှငျ့ ပတျသကျပွီး စိုးရိမျမှုမရှိရနျ ဗဟို ဘဏျက သတငျးထုတျပွနျပွီး နောကျ ပွညျတှငျးငှကွေေးဈေးကှကျ၌ အမရေိကနျဒျေါလာသညျ စကျတငျဘာ ၄ ရကျတှငျ တဈဒျေါလာ ၁,၅၃၇ ကပျြခနျ့သို့ ရောကျရှိ သညျ။ ဩဂုတျလကုနျက တဈဒျေါ လာ ၁,၅၂၀ ကပျြအထိ အမွငျ့ ဆုံးတကျသော ဒျေါလာတနျဖိုး သညျ စကျတငျဘာ ၂ ရကျတှငျ ၁,၅၂၇ ကပျြဖွငျ့ ဈေးပိတျခဲ့သျော လညျး ဒျေါလာတနျဖိုး ထပျမံမွငျ့တကျလာခွငျးဖွဈသညျ။ စကျတငျဘာ ၃ရကျတှငျ တဈဒျေါလာ ၁,၅၃၅ ကပျြဖွငျ့ ဈေး ပိတျခဲ့ပွီးနောကျ ထပျမံမွငျ့တကျ လာခွငျးဖွဈသညျ။ ဒျေါလာဈေးနှငျ့ ရှဈေေးမွငျ့ တကျမှုက ဘဏျမြားနှငျ့ ပတျ သကျသော စိုးရိမျမှုမြားကို အခွခေံပွီး ဈေးကှကျလှုပျရှားသညျ့ အခွအေနမြေိုး ဖွဈလာခွငျးဟု ကမ်ဘာ့ ရတနာဘဏျ ဒုတိယအုပျခြုပျမှု ဒါရိုကျတာ ဒေါကျတာလှညှနျ့က …
ပွညျတှငျးထုတျကုနျမြား နိုငျငံတကာဈေးကှကျနှငျ့ ခြိတျ ဆကျနိုငျရေး ထုတျကုနျပွပှဲကို မွနျမာနိုငျငံ ကုနျသညျမြားနှငျ့ စကျမှုလကျမှုလုပျငနျးရှငျးမြားအသငျး ခြုပျ (UMFCCI)က ဦးဆောငျ၍ သုံးရကျကွာ ကငျြးပရနျ စီစဉျနေ သညျ။ သာကတေမွို့နယျရှိ For-tune ပလာဇာတှငျ စကျတငျဘာ ၂၀ မှ ၂၂ ရကျအထိ UMFCCI Centennial International Expo 2019 ခေါငျးစဉျဖွငျ့ ပွုလုပျမညျ့ ထုတျကုနျပွပှဲ၌ ပွညျတှငျးရှိ အ သေးစားနှငျ့ အလတျစား စီးပှားရေးလုပျငနျးမြား၏ ထုတျကုနျမြား ကို ပွခနျး ၂၀၀ ကြျော ပွသရနျ စီစဉျထားသညျ။ ‘‘ပွပှဲကွီးက ပွညျတှငျး၊ ပွညျပလုပျငနျးရှငျမြားအတှကျ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုနဲ့ စီးပှားရေးအခှငျ့ အလမျးမြား အကောငျးဆုံးရရှိ လာနိုငျမှာပါ’’ဟု ပွပှဲကငျြးပရေး ဗဟိုကျောမတီ တှဲဖကျအတှငျး ရေးမှူး ဦးမြိုးသနျ့က ပွောသညျ။ ဂြာမနီ၊ နယျသာလနျ၊ ဂပြနျ၊ကိုရီးယား၊ …
ပွညျတှငျးရှဈေေးတညျငွိမျစရေနျ လကျထဲတှငျ ရှနှေငျ့ငှရှေိမှသာ တိုကျရိုကျအရောငျးအဝယျပွုလုပျရနျ ပှဲစားမြားနှငျ့ဝယျရောငျးမြားကို ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး ရှလေုပျငနျးရှငျမြားအသငျးက စကျတငျဘာ ၄ ရကျ၌ အသိပေးသညျ။ စကျတငျဘာ ၃ ရကျတှငျ ပွညျတှငျးရှဈေေး ရုတျတရကျ ဆကျတိုကျမွငျ့တကျသညျ့ အခွအေနမြေိုး ကွုံတှရေ့ပွီး နောကျတဈရကျ၌ အသငျးကသတငျးစာ ရှငျးလငျးပှဲ ပွုလုပျ၍ အသိပေး သညျ။‘‘ရှထေိ၊ ငှထေိမှ အရောငျး အဝယျလုပျဖို့ ကြှနျတျောတို့ အ သငျးသားတှကေို အသိပေးထား ပါတယျ’’ဟု ရနျကုနျတိုငျးဒသေ ကွီး ရှလေုပျငနျးရှငျမြားအသငျး အတှငျးရေးမှူး ဦးဝငျးမွငျ့က ပွောသညျ။ စကျတငျဘာ ၃ ရကျကစ၍ ရှဈေေးဆကျတိုကျမွငျ့တကျလာ ခွငျးသညျ ပွညျတှငျးဘဏျမြားမှ ငှထေုတျပွီး ရှဝေယျယူလာကွ ခွငျး၊ နိုငျငံတကာ ရှဈေေးမွငျ့တကျခွငျး၊ မူဆယျ−မန်တလေးပွညျထောငျစုလမျး ပိတျနခွေငျး ကွောငျ့ တရုတျနိုငျငံမှ တရားမဝငျရှမြေား အဝငျနညျးပွီး ဈေးကှကျ အတှငျး ရှရှေားခွငျးကွောငျ့ဖွဈ ကွောငျး …
၂ဝ၁၈ ရာသီ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဒိုင်း ရှုံးထွက်ပြိုင်ပွဲ ဗိုလ်လုပွဲကို ယနေ့ညနေပိုင်းက အောင်ဆန်းကွင်း၌ ကျင်းပရာ ရန်ကုန်အသင်းက ဟံသာဝတီအသင်းကို နှစ်ဂိုး-တစ်ဂိုးဖြင့် အနိုင်ရဗိုလ်စွဲခဲ့သည်။ ရန်ကုန်အသင်းသည် မိနစ် ၆ဝ တွင် ကစားသမားနှစ်ဦး ထုတ်ပယ်ခံရသော ကြောင့် နှစ်ယောက်လျော့ဖြင့် ကစားရသော်လည်း အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာ ချေပဂိုး နှင့် အနိုင်ဂိုးသွင်းပြီး ရှုံးထွက်ချန်ပီယံဆု ရယူနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဟံသာဝတီအသင်းသည် တစ်ကျော့ပြန် ချန်ပီယံဆုရယူနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းသော်လည်း တစ်ဂိုးအသာဖြင့် ဦးဆောင်နေချိန်တွင် ပယ်နယ်တီကန်ခွင့်ရပြီး နှစ်ယောက်အသာ ရသော်လည်း အနိုင်ရလဒ်မထိန်းနိုင်၍ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရန်ကုန်အသင်းသည် တစ်ရာသီအတွင်း ပြိုင်ပွဲနှစ်ခုစလုံး၌ ဗိုလ်စွဲခဲ့ပြီး ရှုံးထွက် ချန်ပီယံဆုကိုမူ ၂ဝ၁၁ ရာသီနောက်ပိုင်း တစ်ကျော့ပြန် ပြန်လည်ရယူနိုင်ခဲ့သည်။ နှစ်သင်းစလုံး အတောင့်တင်းဆုံး လူစာရင်းဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ပထမပိုင်းတွင် ရန်ကုန်အသင်းက ကစားပုံပိုကောင်းခဲ့သည်။ သို့သော် ဟံသာဝတီနောက်တန်း အမှားမရှိသောကြောင့် …
ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန Website မိတ်ဆက်ခြင်း၊ သန်းခေါင်စာရင်းအချက်အလက်နှင့် Online Interactive Maps အကြောင်း ရှင်းလင်း
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီး ဌာန ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန၊ ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေ အဖွဲ့ (UNFPA) နှင့် OneMap Myanmar တို့ ပူးပေါင်း ကျင်းပသည့် ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန Websiteမိတ်ဆက် ခြင်း၊ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် လူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင် စာရင်းအချက်အလက် REDATAM Database နှင့် Online Interactive Maps ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း အခမ်းအနားကို ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ M Gallery Hotel ၌ ကျင်းပသည်။ အခမ်းအနားသို့ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးအေးလွင်၊ ဝန်ကြီးဌာနများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေ အဖွဲ့ (UNFPA) ဌာနေကိုယ်စားလှယ် Ms. Janet E. Jackson နှင့်OneMap Myanmar မှ …
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အကောင်အထည်ဖော်ရေး နှီးနှောဖလှယ်ပွဲသို့ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယနေ့ နံနက်ပိုင်းက နေပြည်တော်ရှိ မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာန(၂)(MICC-2)၌ ကျင်းပသည့် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်၊ ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အကောင်အထည်ဖော်ရေး နှီးနှောဖလှယ်ပွဲသို့ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားသည်။ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းအပြည့်အစုံမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် – ”ဒီနေ့ ဆွေးနွေးမယ့်ကိစ္စတွေက ကျွန်မတို့နိုင်ငံအတွက် အင်မတန်မှ အရေးကြီး တယ်ဆိုတာ ထူးထူးထွေထွေပြောဖို့ မလိုဘူးထင်ပါတယ်။ အဆင့်မြင့်ပညာကဏ္ဍ ဆိုပေမယ့် ကျွန်မတို့ အခက်အခဲရှိတာက ဘာလဲဆိုတော့ မူလတန်းကနေ ပညာဆိုတာ စရတာဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ မူလတန်းကတည်းက ပညာရေးစနစ် အားနည်းတဲ့ အခါကျတော့ အဆင့်မြင့်ရောက်တော့မှ ကျွန်မတို့ရဲ့ လူငယ်တွေကို အဆင့်မြင့်အောင် လုပ်ပေးဖို့ဆိုတာ ပိုပြီးတော့ ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဆင့်မြင့်ကဏ္ဍမှာ ရုန်းကန် ရတဲ့ ဆရာ ဆရာမများ၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအပါအဝင် အခက်အခဲတွေရှိတယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့ရဲ့ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေအတွက်လည်း …
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေးနှင့် တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်တို့မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်သည် ဇူလိုင် ၂၉ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်၊ တိုင်း၊ ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်များမှ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လမ်းညွှန်အမှာစကား ပြောကြားသည်။ အဆိုပါ တွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနားသို့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကျော်ဆွေ၊ သယံဇာတ နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်း၊ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ၊ လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနှင့် တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးများ၊ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်မောင်ထွန်းနှင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ် ဦးဝင်းဆွေ နှင့် တရားသူကြီးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲချုပ် ဒုတိယရဲဗိုလ်ချုပ်ကြီး အောင်ဝင်းဦး၊ တိုင်း၊ …
စက္ကူနဲ့လုပ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံက ဆင်ရုပ်က ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်နေ့မှာ ဂင်းနစ်စံချိန်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီစက္ကူ ဆင်ရုပ်က အလျား ၅.၇၈ မီတာ၊ အမြင့် ၅. ၅၉ မီတာ နဲ့ အနံ ၂. ၁၅ မီတာရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက အနုပညာဖန်တီးသူ အာကာကျော်နဲ့ စက္ကူရုပ်ပညာရှင် ဦးမြင့်ဆွေတို့က ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ စက္ကူနဲ့လုပ်တဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဆင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ထည်ကို ၀ါးတွေနဲ့ အခြေခံပြီးဖန်တီးထားပြီးတော့ အပေါ်ကကိုယ်ထည်ကို သတင်းစာဟောင်းတွေကို အသုံးပြုထားတာပါ။ “ဂင်းနစ်စံချိန်ဝင်ဖို့အတွက်ကိုတော့ ဖန်တီးပြီးသုံးလလောက်အကြာမှာ သူ့ရဲ့အတိုင်းအတာတွေကိုပုံတွေကောကို ပို့ထားတဲ့ဟာကို လက်ခံမခံအကြောင်းပြန်ပါတယ်။ အကြောင်းပြန်ပြီးတော့မှ professional surveyor တွေက လာကြည့်ပြီးတော့ မှ လက်ခံ၊ မခံကို နောက်၃ လကြာပြီးမှ ပြန်အကြောင်းပြန်တာပါ။ စုစုပေါင်း အချိန်ခြောက်လကြာပြီးတော့မှ ဂင်းနစ်စံချိန်ဝင်မ၀င်ကို အကြောင်းပြန်တာပါ။ သူတို့ဘက်ကနေပြီး official certificate ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။” လို့ …
အော်ပရေတာများထံမှ SMS စိတ်ကြိုက်ပယ်ဖျက်နိုင်ပြီ
ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာ သုံးခုဖြစ်တဲ့ MPT ၊ Telenor နဲ့ Ooredoo တို့ ဆီမှ ပေးပို့ လာတဲ့ SMS များကို ပယ်ဖျက်နိုင်ပြီ ဖြစ်တယ်လို့ စားသုံးသူရေးရာ ဦးစီးဌာန CICC မှ အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ စားသုံးသူ (သုံးစွဲသူ) ပြည်သူများသို့ မိမိအသုံးမပြုလိုသော SMS များကြောင့် စိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေရေး ညှိနှိုင်းချက်ကနေ ထုတ်ပြန်အသိပေးထားတာ ဖြစ်ပြီး Operator အသီးသီးမှ SMS များကို ပယ်ဖျက်နည်းပါ ထည့်သွင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ MPT ဖုန်းများမှာ *2007# ကနေတစ်ဆင့် OPTION ကို ရွေးချယ်ကာ ပယ်ဖျက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး Telenor နဲ့ Ooredoo တို့ မှာတော့ 500 နဲ့ 5059 တို့ ကို DND ON ဟု SMS …